Lexus ဟာ Toyota ရဲ့လက်တံတစ်ခုဆိုတာလူတိုင်းအသိ။ Mini ဆိုတာလည်း BMW ကပိုင်ဆိုင်ထားတာ။ ဒါဆိုရင် Lamborghini ကို Audi ကပိုင်ဆိုင်ထားပြီး အဲဒီအမှတ်တံဆိပ်နှစ်ခုစလုံးကို မောင်းနှင်နေတာက Volkswagen ဖြစ်နေတာပါ သိကြမှာပါ။
ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ နာမည်ကျော် ဘယ်ကားထုတ်လုပ်ရေးအမှတ်တံဆိပ်တွေကို ဘယ်သူတွေပိုင်ဆိုင်ကြလဲဆိုတာကို ဖေါ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Jaguar ဆိုရင် ဗြိတိသျှ အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပေမဲ့ လက်ရှိပိုင်ရှင်က အိန္ဒိယက TATA ဖြစ်နေပြီ။
ဒီလိုမျိုးပါပဲ။ ရုံးချုပ်တွေ၊ ဒီဇိုင်း ဌာနတွေနဲ့ စက်ရုံတွေဟာ မူရင်းတည်ထောင်ရာနိုင်ငံတွေမှာရှိနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုမှာတော့ အခြားနိုင်ငံတွေကို ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ ကားအမှတ်တံဆိပ်တွေက ပြောရမယ်ဆိုရင် အများအပြားပါပဲ။ ဘယ် brand ဆို ဘယ်နိုင်ငံက ဆိုတဲ့စကားဟာ လေထဲလွင့်နေတဲ့ ရော်ရွက်တွေလိုပဲ။ ဖမ်းရဆုပ်ရ ခက်ခဲလို့နေပါပြီ။
Toyota ဟာ ၁၉၃၇ ခုနှစ်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိန်မှာ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ကားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးခုထဲက တစ်ခုပါ။ ကုမ္ပဏီဟာ တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကို မော်တော်ယာဉ် ၁၀ သန်းကျော်ထုတ်လုပ်နေရပြီး hybrid ကားဈေးကွက်မှာတော့ ကမ္ဘာ့ဦးဆောင် အမှတ်တံဆိပ်ပါပဲ။
Toyota ရဲ့ လက်ခွဲကုမ္ပဏီတစ်ဖြစ်ပါတယ်။​ Toyota ရဲ့ ဇိမ်ခံကားထုတ်လုပ်ရေး ဌာနခွဲကနေ ၁၉၈၉ ခုနှစ်က စတင်တည်ထောင်လိုက်တာပါ။
Toyota ဟာ အများသူငှာအသုံးပြုဖို့ ဦးစားပေးထုတ်လုပ်ပေမဲ့ Lexus ကတော့ ဇိမ်ခံစီးနင်းလိုသူတွေကို ဦးတည်ပြီး ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါတယ်။
၁၉၀၇ ခုနှစ်ကတည်းက တည်ထောင်ပြီးကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက နာမည်က Hatsudoki Seizo ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၁၉၅၁ ခုနှစ်မှာမှ Daihatsu ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် သြဂုတ်လမှာတော့ Toyota ရဲ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။
GM လို့လူသိများပြီး ၁၉၀၈ ခုနှစ်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာပါ။ အမေရိက ကားထုတ်လုပ်ရေးမှာတော့ အကြီးဆုံးတစ်ခုပေါ့။ GM ရဲ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတွေကိုတစ်ချက်လောက် ကြည့်ကြည့်ပါဦး။
၁၉၁၁ ခုနှစ်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Chevrolet ဟာ ၁၉၁၈ ခုနှစ်ကတည်းက General Motors ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။ Chevrolet Camaro ဆိုရင် ဒီနေ့ခေတ်မှာ ရေပန်းအရမ်းစားပြီး ဒီမှာတော့ Malibu ကို လူတော်တော်များများကြိုက်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။
Buick ဟာလည်း ၁၈၉၉ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီဖြစ်ပေမဲ့ ၁၉၀၈ GM စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်မှာပဲ သိမ်းပိုက်ခြင်းခံလိုက်ရပါတယ်။
GM ထက်စောပြီး ၁၉၀၂ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ ၁၉၀၉ မှာတော့ GM ရဲ့ ဝါးမြိုခြင်းကို ခံလိုက်ရပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Cadillac ကတော့ သူ့ရဲ့ အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ ခံစားချက်ကို အကောင်းဆုံးနေရာမှာ ထိမ်းသိမ်းထားနိုင်ဆဲပါပဲ။
Holden ကတော့ မူလက တောင်သြစတေးလျ ကားထုတ်လုပ်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ၁၈၅၆ မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာပါ။ ၁၉၃၁ ခုနှစ်မှာတော့ GM က ဝယ်ယူသွားပါတော့တယ်။ ဒီလိုဝယ်ယူပြီးနောက်ပိုင်း သြစတေးလျမှာရော နယူးဇီလန်မှာပါ ကားထုတ်လုပ်ရေးတွေဆက်မလုပ်ခဲ့ကြတော့ ဝမ်းနည်းစရာပါပဲ။
၁၉၈၇ မှစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ Holden ကားတွေကိုအခြေခံပြီး စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် sedan တွေအများကြီးထုတ်ခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီပါ။ သူလည်းပဲ GM ရဲ့ လက်ခွဲ ကားထုတ်လုပ်ရေးတစ်ခုပါပဲ။
၁၉၃၇ ခုနှစ်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီပါ။ ကိုယ်တိုင်တော့ လူအများစု စီးနင်းအသုံးပြုဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး မော်တော်ယာဉ်တွေထုတ်လုပ်ပေမဲ့ Super ကားတွေထုတ်လုပ်ရေးတွေကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ တစ်ချိန်တုန်းကတော့ လိပ်ခုံးကားလို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရေပန်းစားတဲ့ Beetle တွေကို ၁၉၃၈ ခုနှစ်ကနေပြီး ၂၀၀၃ ခုနှစ်အထိ ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါဟာ ကမ္ဘာ့ကားလောကမှာ သက်တမ်းအကြာဆုံးထုတ်လုပ်မှုတစ်ခုလို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ သူဝယ်ယူဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာကျော်ကားကုမ္ပဏီကြီးတွေကို တစ်ချက်ကြည့်ပါဦး။
၁၈၉၉ မှာ August Horch ရဲ့ Horch & Cie. ဆိုတဲ့ မော်တော်ကားထုတ်လုပ်ရေးကစတင်ခဲ့တယ်။ နောက်ထပ် ဆယ်နှစ်အကြာမှာ Horch ကပဲ Audi Automobilwerke in Zwickau အမည်နဲ့ နောက်ထပ်မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးတစ်ခုကို ထပ်မံတည်ထောင်ခဲ့ပြန်တယ်။ နောက်ပိုင်း Audi ၊ DKW ၊ Horch နဲ့ Wanderer ဆိုတဲ့ မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီလေးခု ပေါင်းစည်းပြီး Auto Union AG ဆိုပြီးဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ Audi AG ဆိုပြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ Daimler Benz ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်ကိုရောက်ရှိခဲ့သေးပြီး ၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေကနေပြီး ယနေ့အထိမှာတော့ Audi ဟာ Volkswagen ရဲ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုပါပဲ။ လက်ရှိအချိန် မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခေတ်ရှေ့အပြေးဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုပေါ့။
Lamborghini ဆိုတာကတော့ ကားနဲ့မနီးစပ်တဲ့သူတွေတောင် ကြားဖူးတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကမ္ဘာကျော်ဆယ်လီတွေ အထူးနှစ်သက်လေ့ရှိတဲ့ Lamborghini ဟာ ၁၉၆၃ခုနှစ်မှာ စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ခုနှစ်မှာတော့ Audi ရဲ့ ထောက်ပံ့ပေးမှုနဲ့ ဆက်လက်ရပ်တည်နေခဲ့ပြီး ယနေ့အချိန်မှာတော့ Audi ဟာ အလုံးစုံပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Lamborghini ဟာ လက်ရှိမှာ Huracan ၊ Aventador ၊ Urus SUV foray တို့လို ကမ္ဘာကျော်ကားတွေကို ဆက်လက်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပြီး Audi ဟာ Volkswagen ရဲ့လက်အောက်မှာဖြစ်တာကြောင့် တစ်နည်းဆိုရရင် Lamborghini ဟာလည်း Volkswagen ရဲ့ လက်အောက်က ကားအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုလို့ သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။
၁၉၁၉ ခုနှစ်က စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Bentley ဟာ ပိုင်ရှင်အဆင့်ဆင့် လက်လွှဲယူခဲ့တဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုပါ။ ၁၉၁၉ကနေ ၁၉၃၁အထိ ကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်ခဲ့ပေမဲ့ ၁၉၃၁မှာတော့ Rolls-Royce က ဝယ်ယူခဲ့ပြီး ၁၉၇၀မှာ Vickers PLC က ထပ်မံ လွှဲပြောင်းဝယ်ယူခဲ့တယ်။ ၁၉၉၈ကနေ ယနေ့အချိန်ထိကိုတော့ Volkswagen က ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ Bentley ဟာ Bentayga ၊ Flying Spur တို့လို လူကြိုက်များတဲ့ ကားတွေကို ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါတယ်။
၁၉၀၉ ခုနှစ်က စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Bugatti ဟာ ပထမကမ္ဘာစစ်နဲ့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နှစ်ခုစလုံးကို ကြံ့ကြံ့ခံကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ၁၉၄၇မှာတော့ စတင်တည်ထောင်သူ Ettore Bugatti ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ ကုမ္ပဏီက ယိုင်လဲသွားပြီး ၁၉၆၀အထိ ကားထုတ်လုပ်မှု ဆက်လက်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ၁၉၆၀နောက်ပိုင်းမှတော့ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရတယ်။ ၁၉၈၇မှာ အီတလီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် Romano Artioli ကြောင့် ပြန်လည်ရှင်သန်လာခဲ့ပြီး ၁၉၉၈မှာတော့ Volkswagen က ဝယ်ယူသွားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ Bugatti Chiron ကို ထုတ်လုပ်ထားပြီး လူကြိုက်များလျက်ရှိပါတယ်။
အမြန်ဆုံးကားကိုပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့သူတိုင်းအတွက် Bugatti ဟာ မရှိမဖြစ်အမှတ်တံဆိပ်ပါပဲ။
၁၈၉၅ ခုနှစ်ကတည်းက ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Skoda ဟာ နှစ်ပေါင်း တစ်ရာကျော်သက်တမ်းထိရှိတဲ့ သက်တမ်းရင့် ကားအမှတ်တံဆိပ်တခုပဲ ဖြစ်တယ်။ သူတို့ရဲ့ ရုံးချုပ်က ချက် နိုင်ငံမှာ တည်ရှိပြီး သူ့ကိုလည်း Volkswagen က ပိုင်ဆိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းချိုသာတဲ့ Skoda အမှတ်တံဆိပ်ကားတွေဟာ Volkswagen ကားတွေအတိုင်းပဲ ရိုးရှင်းလှပတဲ့ ကားတွေလို့ ဆိုလို့ရပါတယ်။
Porsche အမှတ်တံဆိပ်ဟာလည်း ကားကိုအရူးအမူးစွဲလမ်းသူတွေကြားမှာ ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းဆီခိုင်လို့တောင် သတ်မှတ်လို့ရတယ်။ ၁၉၃၁ခုနှစ်မှာ စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Porsche အမှတ်တံဆိပ်ဟာလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂မှာ Volkswagen ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုအောက်ကို ရောက်ရှိခဲ့တယ်။ လက်ရှိမှာ Porsche ရုံးချုပ်ဟာ ဂျာမနီ၊ စတုဂတ်မှာ အခြေစိုက်တဲ့ ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Fiat Chrysler Automobiles ဟာ သက်တမ်းအားဖြင့် ငါးနှစ်သာကြာမြင့်ပါသေးတယ်။ အရင်တုန်းက Fiat နဲ့ Chrysler ဟာ သီးခြားစီဖြစ်ပေမဲ့ ၂၀၀၉ခုနှစ်မှာ Chrysler ဟာ ဘဏ္ဍာရေးအကြပ်အတည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၄မှာ Fiat က ဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီး Fiat Chrysler Automobiles ဆိုပြီး ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ။ တကယ်တမ်းတော့ Chrysler ရဲ့လက်အောက်မှာ ရှိတဲ့ ကားတွေက အများစုဖြစ်ပြီး Fiat က Chrysler ဝယ်ယူလိုက်ပြီးနောက်မှာတော့ Fiat Chrysler Automobiles ဆိုပြီး ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာလို့ သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ Fiat Chrysler Automobiles ရဲ့ လက်အောက်က ကားထုတ်လုပ်ရေးတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာ ကြည့်ကြည့်ရအောင် …။
၁၈၉၉ခုနှစ်ကတည်းက ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Fiat ဟာ အီတလီနိုင်ငံရဲ့ တူရင်မြို့အခြေစိုက် သက်တမ်းရင့် မော်တော်ကားထုတ်လုပ်တဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ Fiat ဟာ သူ့ဘာသာသီးခြားရပ်တည်တဲ့ ကားထုတ်လုပ်ရေးဖြစ်ပေမဲ့ ၂၀၁၄ခုနှစ်မှာ စတင်လိုက်တဲ့ Fiat Chrysler Automobiles ရဲ့ လက်အောက်ခံအဖြစ်လို့သာ သတ်မှတ်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၄၉ခုနှစ်က စတင်ခဲ့တဲ့ Abarth အမှတ်တံဆိပ်ကားထုတ်လုပ်ရေးဟာလည်း တူရင်မြို့အခြေစိုက်တဲ့ ကားထုတ်လုပ်ရေးတစ်ခုပါပဲ။ သူကတော့ Fiat ရဲ့ လက်အောက်ကို ၁၉၇၁ခုနှစ်ကတည်းက ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုချိန်မှာတော့ Fiat Chrysler Automobiles ရဲ့ လက်အောက်ခံ ကားထုတ်လုပ်ရေးအဖြစ် ဆက်လက်လည်ပတ်နေပါတယ်။
အထက်မှာဆိုခဲ့သလိုပဲ Chrysler ဟာ Fiat ရဲ့ လက်အောက်ကိုမရောက်ခင် နှစ်ပေါင်းများစွာ သီးခြားရပ်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့ ကားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၂၅ခုနှစ်မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အမေရိကန်အခြေစိုက် Chrysler ဟာ ၂၀၀၉ခုနှစ်မှာ အကျပ်အတည်းဖြစ်ပေါ်မှုကြောင့် Fiat က ဝင်ရောက်ကယ်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၂၀၁၄မှာတော့ Fiat ရဲ့ လက်အောက်ကို အပြည့်အဝ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး Fiat Chrysler Automobiles အဖြစ်လည်ပတ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၀၀ ပြည့်နှစ်မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Dodge ဟာ ပထမတုန်းကတော့ Dodge Brothers Company ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၁၉၂၅ခုနှစ်မှာတော့ Dillon Read & Co. က လွှဲပြောင်းရယူခဲ့ပြီး ၁၉၂၈မှာတော့ Chrysler ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။ Chrysler ဟာ ၁၉၂၈ကနေ ၂၀၁၄ ထိ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုအခါမှာတော့ Fiat Chrysler Automobiles အောက်မှာ ဆက်လက်လည်ပတ်လျက်ရှိပါတယ်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းဖြစ်တဲ့ ၁၉၄၃ခုနှစ်မှာ စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Jeep အမှတ်တံဆိပ်ဟာ စတင်ထုတ်လုပ်တုန်းက အမေရိကန်စစ်သားတွေစီးနင်းဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်လုပ်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီတုန်းက Jeep အမှတ်တံဆိပ်ကိုပိုင်ဆိုင်တာက Willys-Overland ပါ။ ၁၉၅၃မှာတော့ Kaiser-Jeep က ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီး ၁၉၇၀ မှာတော့ American Motors Corporation က ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာပါ။ ပိုင်ဆိုင်အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ Jeep အမှတ်တံဆိပ်ဟာ ၁၉၈၇ခုနှစ်မှာတော့ Chrysler ကပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုချိန်မှာတော့ Fiat Chrysler Automobiles လက်အောက်ကို ရောက်ရှိခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အီတလီနိုင်ငံ၊ တူရင်မြို့အခြေစိုက် Alfa Romeo ဥရောပမှာတော့ လူကြိုက်များတဲ့ ကားတစ်စီးပါပဲ။ ၁၉၁၀ခုနှစ်မှာ စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ဒီအမှတ်တံဆိပ်ဟာ ၂၀၀၇ခုနှစ်မှာ Fiat ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး အခုချိန်မှာ‌တော့ Fiat Chrysler Automobiles လက်အောက်ကို ရောက်ရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာ Lancia အမှတ်တံဆိပ်ဟာ အီတလီပြည်တွင်းမှာသာ အဓိကထားထုတ်လုပ်နေပေမဲ့ လူသိများထင်ရှားတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Lancia အမှတ်တံဆိပ်ကိုတော့ ၁၉၆၉ခုနှစ်မှာ Fiat က ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်မှာတော့ Fiat Chrysler Automobiles ကို ရောက်ရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၇၆ခုနှစ်မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Groupe PSA ရဲ့ လက်အောက်မှာတော့ ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ သက်တမ်းရင့် ကားထုတ်လုပ်ရေးအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Peugeot အပြင် Citroën ၊ Opel ၊ Vauxhall တို့ကိုပါ ပိုင်ဆိုင်ထားတာကို တွေ့ရမှာပါ။ Groupe PSA အနေနဲ့ အထက်ပါကားတွေကို ဘယ်လိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့သလည်းဆိုတာ ကြည့်ကြည့်ရအောင်။
Peugeot အမှတ်တံဆိပ်ဟာ ၁၈၁၀ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး မူလက ကားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်တာမဟုတ်ဘဲ ကော်ဖီထုတ်လုပ်ရေးလုပ်တာပါ။ ၁၈၃၀မှာတော့ စက်ဘီးကို ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ခဲ့သလို ၁၈၈၂ခုနှစ်မှာတော့ မော်တော်ကားထုတ်လုပ်ရေးအဆင့်ကို ပြောင်းလဲခဲ့တယ်လို့ ဆိုလို့ရတယ်။ နောက်ပြီးတော့ Peugeot ဟာ Groupe PSA ဖြစ်လာခြင်းရဲ့ အစလို့လည်း ဆိုလို့ရသေးတယ်။ ၁၉၇၆ခုနှစ်မှာ Peugeot ဟာ ဒေဝါလီခံခဲ့ရချိန်မှာတော့ Citroën က Peugeot ရဲ့ အစုရှယ်ယာကိုးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကို ဝယ်ယူခဲ့ပြီး Peugeot အမှတ်တံဆိပ်ကို ပြန်လည်ရှင်သန်စေခဲ့သလို Groupe PSA ကိုလည်း စတင်ပေါက်ဖွားစေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံအခြေစိုက် Citroën ဟာ ၁၉၁၉ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာပါ။ သူကလည်း Groupe PSA ဖြစ်လာခြင်းရဲ့ အစတခုဖြစ်သလိုလက်ရှိမှာတော့ Groupe PSA ရဲ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီအဖြစ် ရှိနေတာပါ။ Citroën သိပ်ပြီးတန်ဖိုးမြင့်တဲ့ကားတွေကို ထုတ်လုပ်လေ့မရှိဘဲ လူလတ်တန်းတွေ စီးနင်းဖို့ပိုမိုလွယ်ကူတဲ့ ကားအမျိုးအစားတွေကိုပဲ အများဆုံးထုတ်လုပ်တာပါ။
၁၉၂၉ကနေ ၂၀၁၇အထိ General Motors ပိုင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Opel အမှတ်တံဆိပ်ဟာ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ Groupe PSA လက်အောက်ကို ရောက်ရှိလို့နေပါပြီ။ Opel အမှတ်တံဆိပ်ဟာ ၁၈၆၂ခုနှစ်ကတည်းက စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၁၈၉၉ခုနှစ်ရောက်မှ မော်တော်ကားတွေ စတင်ထုတ်လုပ်လာတာပါ။ ဂျာမနီနိုင်ငံအခြေစိုက် Opel အမှတ်တံဆိပ်ဟာလည်း လူသိများတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူလည်း Opel နဲ့အတူတူ ၂၀၁၇မှာ General Motors ကနေ Groupe PSA ကို လွှဲပြောင်းခဲ့တာပါပဲ။ သူကတော့ အင်္ဂလန်အခြေစိုက်တဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၁၈၅၇ခုနှစ်မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၀၃ခုနှစ်မှာ မှ မော်တော်ကားတွေကို စတင်ထုတ်လုပ်လာခဲ့တဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Daimler AG ရယ်လို့ မဖြစ်လာခင်တုန်းက Daimler-Benz ၊ Daimler Chrysler ဆိုပြီး ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ၁၉၂၆ခုနှစ်မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Daimler ဟာ ၁၉၂၆ကနေ ၁၉၉၈အထိ Daimler-Benz အမည်နဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၈ကနေ ၂၀၀၇ခုနှစ်အထိကို Daimler Chrysler ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဖြစ်ကာ ၂၀၀၇ကနေ လက်ရှိအချိန်ထိကိုတော့ Daimler AG ဆိုပြီး ဖြစ်လာတာပါ။
Daimler AG လက်အောက်က အကျော်ကြားဆုံး အမှတ်တံဆိပ်ကတော့ Mercedes-Benz ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၈၈၃ ခုနှစ်မှစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့သက်တမ်းအရင့်ဆုံး ကားထုတ်လုပ်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ တန်ဖိုးကြီးဇိမ်ခံကားမျိုးစုံကိုထုတ်လုပ်လျက်ရှိပြီး စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ကားတွေကိုလည်း ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါတယ်။
Mercedes-Benz ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ပြီးသားကားတွေကို Mercedes ပိုင် Mercedes-AMG GmbH ကုမ္ပဏီက ပိုပြီးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးနေတာလည်းရှိပါသေးတယ်။ Mercedes-AMG GmbH ကိုတော့ AMG လို့လူသိများပြီး လွတ်လပ်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့နဲ့ Mercedes ရဲ့ကားတွေကို ဝယ်သူစိတ်တိုင်းကျ ပြုပြင်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှုတွေလုပ်ဆောင်နေကြတာပါ။
Mercedes-Benz ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ကားတွေကို Formula 1 ပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်း အကောင်းဆုံးအနေအထားနဲ့ တွေ့မြင်ကြရမှာပါ။
Smart ကတော့ Daimler AG ရဲ့ သီးသန့် ကားသေး ထုတ်လုပ်ရေးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ မူလစိတ်ကူးက Swiss ရဲ့နာမည်ကျော် နာရီထုတ်လုပ်ရေး Swatch ကနေလာတာဖြစ်ပြီး အစတုန်းက Swatch နဲ့ Mercedes တို့ Smart ကိုပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတာပါ။
အခုအချိန်မှာတော့ Smart ကို Daimler AG က ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း တရုတ်မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေး Geely က ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ်။
Maybach ကိုတော့ ၁၉၀၉ ခုနှစ်မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာပါ။ ၁၉၆၀ မှာ Daimler ကဝယ်ယူခဲ့ပြီးနောက် Rolls Royce နဲ့တိုက်ရိုက်ပြိုင်ဘက်အဖြစ်နဲ့ အဆုံးစွန်သော ဇိမ်ခံကားတွေကို ထုတ်လုပ်တဲ့အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှု၊ ရောင်းအားကျဆင်းမှုတို့နဲ့အတူ Maybach အမှတ်တံဆိပ်ဟာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ပျောက်ကွယ်သလိုဖြစ်သွားခဲ့သေးတာပါ။
၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာတော့ Mercedes-Maybach အဖြစ်နဲ့ ပြန်လည်အသက်ဝင်လာခဲ့ပြီး ဇိမ်ခံမှုပိုင်းအလေးပေးထားသော်လည်း ပိုပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့ပုံစံနဲ့ ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။
BMW လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ ဇိမ်ခံကားတွေထဲမှာ တန်ဖိုးကြီးတဲ့ကားတစ်စီးအဖြစ် လူတိုင်းသိကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ မြူးနစ်မြို့မှာ အခြေစိုက်ထုတ်လုပ်တဲ့ BMW အမှတ်တံဆိပ်ဟာ ၁၉၁၆ ခုနှစ်က စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်လို့ အခုဆိုရင် နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော်ခဲ့ပါပြီ။ BMW ရဲ့ လက်အောက်မှာ ရှိတဲ့ ကားအမှတ်တံဆိပ်တွေကို တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်။
Mini ကားတွေဟာ တစ်ချိန်တုန်းက အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ ကားအသေးစားလေးတွေပါ။ ၁၉၅၉ခုနှစ်မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Mini အမှတ်တံဆိပ်ကို ၁၉၉၄ခုနှစ်မှာ BMW က ဝယ်ယူခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံး ဇိမ်ခံကားတွေကို ထုတ်လုပ်တဲ့ Rolls-Royce အမှတ်တံဆိပ်ဟာ အင်္ဂလန်အခြေစိုက်ထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပေမဲ့ အခုချိန်မှာတော့ BMW က ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်စဉ် ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်တဲ့ကားတွေကိုသာ ထုတ်လုပ်လေ့ရှိတဲ့ Rolls-Royce ကို ၁၉၉၈ခုနှစ်မှာ Volkswagen ဆီကနေ BMW က လွှဲပြောင်းဝယ်ယူခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံအခြေစိုက် Groupe Renault ဟာ နေ့စဉ်အသုံးပြုတဲ့ကားတွေ၊ ဇိမ်ခံကားတွေအပြင်ကိုမှ ထရပ်ကားတွေ၊ လယ်ထွန်စက်တွေ၊ တင့်ကားတွေ၊ ဗင်ကားတွေ၊ အစရှိတဲ့ ကားတွေကို ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ကြီးမားတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုပါ။ ၁၈၉၉ခုနှစ်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Groupe Renault ဟာ ကမ္ဘာ့မော်တော်ယာဉ်ဈေးကွက်ဝေစုမှာလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ခုနှစ်မှာ Volkswagen AG ကိုတောင် ကျော်တက်သွားခဲ့တယ်လို့ သိရတယ်။ သူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာရော ဘယ်လို ကားအမှတ်တံဆိပ်တွေပါမလဲ..။
၁၉၃၃ခုနှစ်မှာ စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံအခြေစိုက် Nissan ဟာ အခုဆိုရင် Groupe Renault ရဲ့ လက်အောက်ကို ရောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ Groupe Renault ဟာ အလုံးစုံပိုင်ဆိုင်တာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ Nissan ရဲ့ ရှယ်ယာ ၄၃% အထိ ပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပြီး ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှာ စတင်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Nissan ရဲ့ လက်အောက်ခံ Infiniti အနေနဲ့လည်း အခုချိန်မှာတော့ Groupe Renault လက်အောက်ကို ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၈၉ခုနှစ်ကမှ စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံအခြေစိုက် Infiniti ဟာလည်း Groupe Renault ရဲ့ လက်အောက်ခံ ကားထုတ်လုပ်ရေးဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ခုနှစ်မှာ Mitsubishi ရဲ့ အစုရှယ်ရာ ၃၄% ကို Nissan က ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၁၉၁၇ခုနှစ်မှာ ဂျပန်နိုင်ငံအခြေစိုက်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Mitsubishi အနေနဲ့ အခုချိန်မှာတော့ မူလပိုင်ဆိုင်မှု ၂၀% လောက်သာ ပိုင်ဆိုင်တော့တာကို တွေ့ရမှာပါ။ ဒါကြောင့် လက်ရှိမှာတော့ Mitsubishi ဟာလည်း Groupe Renault ရဲ့ လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီလို့ ဆိုလို့ရပါတယ်။
၁၉၄၅ ခုနှစ်မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Tata Motors ဟာ အိန္ဒိယအခြေစိုက် ကားထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုပါ။ ၁၉၅၄ ခုနှစ်ကနေ ၁၉၆၉ ခုနှစ်အတွင်း Daimler-Benz နှင့်လက်တွဲခဲ့ဖူးပြီး လက်ရှိမှာ အိန္ဒိယရဲ့ ကြီးမားတဲ့ industry အဖြစ် ရပ်တည်နေတာပဲ ဖြစ်တယ်။ လက်ရှိအချိန် သူ့ရဲ့လက်အောက်မှာတော့ ကမ္ဘာကျော်အမှတ်တံဆိပ်တွေဖြစ်တဲ့ Land Rover နဲ့ Jaguar တို့ ရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၄၈ ခုနှစ်က စတင်ခဲ့တဲ့ Land Rover ဟာ အခုချိန်မှာ Tata Motor က ပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ။ Land Rover ဟာ Tata Motor မတိုင်ခင်တုန်းက Ford က ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ Tata Motor က လွှဲပြောင်းယူခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ မြန်မာပြည်က ကားချစ်သူတွေနဲ့ မစိမ်းတဲ့ Land Rover ဟာ အခုချိန်မှာ Tata Motor ကပိုင်ဆိုင်ထားတာဆိုပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ ကားထုတ်လုပ်ရေးကတော့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာပဲ အခြေစိုက်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါတယ်။
ဗြိတိန်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ကားအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်တဲ့ Jaguar ဟာလည်း အခုချိန်မှာ Tata Motor လက်အောက်မှာပါ။ သူကလည်း Land Rover နဲ့အတူတူပါပဲ တစ်ချိန်တုန်းက Ford ကပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၂၀၀၈ခုနှစ် အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးအကြပ်အတည်းကြောင့် Tata Motor ကို ရောင်းချခံခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ Jaguar နဲ့ Land Rover တို့ဟာ၂၀၀၈ ခုနှစ် Tata Motor က ပိုင်ဆိုင်ပြီးနောက်မှာ Jaguar Land Rover (JLR) ဆိုပြီး ပေါင်းစည်းခဲ့တာကို တွေ့ရမှာပါ။
Hyundai ဆိုတာကတော့ ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရ ကားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုပါ။ Hyundai ရဲ့ အမှတ်တံဆိပ်ဟာ မြန်မာပြည်မှာ တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုနေတာကို တွေ့ရတယ်။ ၁၉၆၇ ခုနှစ်မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Hyundai Motors ဟာ လက်ရှိမှာလည်း ကိုရီးယားအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ လက်အောက်က ကားတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ ကြည့်ကြည့်ရအောင် …
၁၉၄၄ခုနှစ်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Kia ဟာ ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ ဆိုးလ်မြို့မှာ အခြေစိုက်ထုတ်လုပ်တဲ့ ကားအမှတ်တံဆိပ်ပါ။ ၁၉၉၇ခုနှစ်မှာ Kia ဟာ ဘဏ္ဍရေးအကြပ်အတည်းဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီး ၁၉၉၈ခုနှစ်မှာတော့ Hyundai Motors ဟာ Kia ရဲ့ ရှယ်ယာထက်ဝက်ကျော်ကို ပိုင်ဆိုင်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ Kia ဟာ ပြန်လည်ဦးမော့လာပြီး ဈေးကွက်ထဲမှာ ပြန်လည်ရှင်သန်လာနိုင်ခဲ့တယ်။ အခုချိန်မှာတော့ Hyundai Motors ဟာ Kia ရဲ့ ရှယ်ယာ သုံးပုံတစ်ပုံကျော်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူကတော့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကမှ စတင်ခဲ့တာပါ။ ဆိုရရင် Hyundai Motors ရဲ့ နောက်ထပ်အမည်တစ်ခုနဲ့ ထုတ်လုပ်တဲ့ အမှတ်တံဆိပ်လို့ ဆိုလို့ရမယ်။ Genesis အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ ဇိမ်ခံကားတွေကို ထုတ်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပြီး ယခုငါးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာ မော်ဒယ်လေးမျိုးအထိ ထုတ်လုပ်ထားပြီးပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Geely အမှတ်တံဆိပ်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံအခြေစိုက်ဖြစ်ပြီး ၁၉၈၆ခုနှစ်မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာပါ။ သက်တမ်းအားဖြင့် အခြား အမှတ်တံဆိပ်တွေလောက် သက်တမ်းမရင့်ပေမဲ့ Volvo လို ဥရောပရဲ့ အထင်ကရ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကတော့ အံ့အားသင့်စရာပါ။
ဥရောပရဲ့ သက်တမ်းရင့်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်တဲ့ Volvo ဟာ ၁၉၂၇ခုနှစ်မှာ စတင်ခဲ့ပြီး ဆွီဒင်အခြေစိုက် ကားအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၂၇ ကနေ ၁၉၉၉ အထိ Volvo ဟာ သီးသန့်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှာတော့ Ford ရဲ့ လက်အောက်ကို ရောက်ရှိခဲ့တယ်။ အဲဒီကာလတွေမှာတုန်းက Ford ဟာ Premier Automotive Group (PAG) ဆိုပြီး (PAG) ရဲ့ လက်အောက်မှာ Jaguar ၊ Aston Martin နှင့် Land Rover တို့နှင့် Volvo ကို ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ၂၀၀၈ခုနှစ် အမေရိကန်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုအပြီးမှာတော့ Ford ဟာ Volvo ကို ပြန်လည်ရောင်းချဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ၂၀၁၀မှာတော့ Geely ဟာ Volvo ကို ဝယ်ယူသွားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖော်မြူလာဝမ်းပြိုင်ပွဲမှာ ချန်ပီယံခုနှစ်ကြိမ်ထိ ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ Lotus ကားကုမ္ပဏီဟာ ဗြိတိန်အခြေစိုက် အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၁၉၄၈ခုနှ်စ်ကတည်းက ထည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်လို့ အခုဆိုရင် ၇၂ နှစ်အထိသက်တမ်းရှိနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Lotus ကို တည်ထောင်သူ Colin Chapman သေဆုံးပြီးနောက် Lotus ရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေတွေ ကျဆင်းလာခဲ့ကာ အဆင့်ဆင့် ရောင်းချခဲ့ရပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ မှာတော့ Geely က ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၉ခုနှစ်မတိုင်ခင်တုန်းက Ford ဟာ အခြားသော ကမ္ဘာကျော်ကားအမှတ်တံဆိပ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးခဲ့ပေမဲ့ အခုချိန်မှာတော့ Aston Martin နှင့် Mazda တို့မှာ ရှယ်ယာအနည်းအကျဉ်းသာ ပါဝင်တော့တာကို တွေ့ရမှာပါ။ Ford အမှတ်တံဆိပ်ဟာ အမေရိကန်ရဲ့ ကားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာ အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး ယနေ့အချိန်မှာလည်း ဘယ်ကားကုမ္ပဏီရဲ့ လက်အောက်ခံမှ မဟုတ်ဘဲ သီးခြားရပ်တည်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Ford Family ပိုင်ဆိုင်ထားဆဲ ဖြစ်တဲ့ Ford အမှတ်တံဆိပ်ဟာ ယခုအချိန်ထိတိုင် ကားလောကရဲ့ ဈေးကွက်မှာ ထိပ်တန်းတစ်နေရာကို ပိုင်ဆိုင်ထားဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံအခြေစိုက် Honda ဟာ ၁၉၄၆ ခုနှစ်မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာပါ။ Honda ဟာ ကားတွေမထုတ်လုပ်ခင် ဆိုင်ကယ်တွေထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး အကြီးအကျယ်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အမှတ်တံဆိပ်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ၁၉၆၇ ခုနှစ်မှာတော့ မော်တော်ကားတွေကို စတင်ထုတ်လုပ်လာခဲ့ပြီး ယခုအချိန်အထိ မော်တော်ကားနဲ့ ဆိုင်ကယ် နှစ်မျိုးစလုံးကို အောင်အောင်မြင်မြင်ထုတ်လုပ်နေတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုပါ။ Honda အမှတ်တံဆိပ်ကလည်း လက်ရှိအချိန်ထိ ဘယ်ကုမ္ပဏီရဲ့ လက်အောက်ခံမှ မဟုတ်ဘဲ သီးခြားရပ်တည်နေတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ SKD စနစ်နဲ့ တွင်တွင်ထုတ်လုပ်နေတဲ့ Suzuki အမှတ်တံဆိပ်ဟာလည်း သီးခြားရပ်တည်နေတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၀၉ ခုနှစ်မှာ စတင်ထည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ဂျပန်အခြေစိုက် Suzuki အမှတ်တံဆိပ်ဟာ တစ်ချိန်တုန်းက Volkswagen က ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးသေးပေမဲ့ ၂၀၀၉ကနေ ၂၀၁၅ ကြားမှာ Suzuki က ပြန်လည်ဝယ်ယူခဲ့ပြီး ယခုအခါမှာတော့ Suzuki ကပဲ အပြည့်အဝပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချိန်တုန်းက Mazda အမှတ်တံဆိပ်ကို Ford နဲ့ ဂျပန်က ဘဏ်အချို့က ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပေမဲ့ အခုချိန်မှာတော့ သီးခြားရပ်တည်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၆ခုနှစ်မှာတုန်းက Ford က ရှယ်ယာအများဆုံးအဖြစ် ၃၃% အထိ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးပေမဲ့ အခုချိန်မှာတော့ Mazda ဟာ ဘယ်ကုမ္ပဏီရဲ့ လက်အောက်ခံမှ မဟုတ်တော့တဲ့ သီးခြားအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Fuji Heavy Industries ကိုတော့ ၁၉၅၀ ခုနှစ်မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ သူကတော့ Subaru တွေရဲ့ပိုင်ရှင်ပေါ့။
Subaru တွေဟာ အင်ဂျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သိပ်ကိုကျော်ကြားပါတယ်။ ကားမောင်းပြိုင်ပွဲများစွာက အောင်မြင်မှုတွေနဲ့အတူ လေးဘီးယက်စနစ်မှာလည်း ဂုဏ်သတင်းကြီးတဲ့ ရွှေမင်းသမီးပါ။ လက်ရှိအချိန်မှာ Subaru ရဲ့ရေပန်းစားမှုဒီရေဟာ အကျဘက်ကိုရောက်နေပေမဲ့ Subaru ပရိတ်သတ်တွေကတော့ Subaru မှ Subaru ဖြစ်နေတုန်းပါပဲ။
၁၉၃၀ ခုနှစ်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာကျော် ဇိမ်ခံ sports ကားတွေရဲ့အမှတ်သညှာတခုဖြစ်တဲ့ အီတလီက Ferrari အမှတ်တံဆိပ်ဟာ ကမ္ဘာကျော်ဆယ်လီတွေ ကြိုက်နှစ်သက်လေ့ရှိတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုပါ။ အထူးသဖြင့် ပြိုင်ကားတွေထုတ်လုပ်ရာမှာ နာမည်ကျော်ကြားပြီး လူကြိုက်များလှတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ Ferrari အမှတ်တံဆိပ်ဟာ သီးခြားရပ်တည်နေတယ်ဆိုပေမဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အပိုင်းအခြားတွေတုန်းက Fiat က ရှယ်ယာရာခိုင်နှုန်းအများအပြား ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးပါသေးတယ်။
အားလုံးနဲ့မတူညီဘဲ တမူထူးကဲတဲ့ ကားတွေကို ထုတ်လုပ်လေ့ရှိတဲ့ Tesla ကုမ္ပဏီဟာ ၂၀၀၃ခုနှစ်ကမှ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ အခြေစိုက်ထုတ်လုပ်နေတာပါ။ Tesla ဟာ လျှပ်စစ်ကားတွေထုတ်လုပ်ပြီး အချိန်တိုအတွင်းမှာ ကားလောကကို လှုပ်ခတ်နိုင်တဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ကာ Tesla ရဲ့ ရှယ်ယာအများဆုံးပိုင်ရှင်ကတော့ တည်ထောင်သူ Elon Musk ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Tesla ကိုနောက်မှပေါက်ပေမဲ့ ရွှေကြာပင်ရယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံး မော်တော်ယာဉ် အမှတ်တံဆိပ် ဖြစ်တော့မှာမို့လို့ပါပဲ။
Ref: Auto manufacturer family tree: Who owns what?
By Leigh Giollo, Daniel Gardner.
YBS ယာဉ်လိုင်း လမ်းကြောင်းများအတွင်းရှိ အောက်ဆိုက်ကားများအား ပိုမိုထိရောက်သည့် ဥပဒေများဖြင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်